म बुलडोजर चलाउँछु । मलाई बुलडोजर–गर्ल भन्‍न सक्नुहुन्छ । तर प्लिज ! लेखमा मेरो नाम उल्लेख नगरिदिनु होला । कारण, मेरो लोग्‍नेलाई निको लाग्दैन । लोग्‍नेले मलाई अत्यन्त माया गर्नुहुन्छ । म पनि उहाँलाई औधी माया गर्छु । केही दिनयता भने उहाँको मायामा कैफियत देख्छु ।
केही दिनयता भन्‍नाले तपाईंको अपहरण भएयता भन्‍न खोज्‍नुभएको हो ?
सही ठम्याउनुभयो । म शिवपुरी जंगलमा बुलडोजर चलाइरहेकी थिएँ । माटो–बाटो सम्याइरहेकी थिएँ । यस्तैमा कुन्‍नि कताबाट एउटा मान्छे आइपुग्यो । त्यो अग्लो चिन्डे मान्छेले कालो अलीबाबा ट्राउजर अनि कालै ओभरकोट लगाएको थियो । उसैले मेरो अपहरण गरेको हो । अपहरण पनि के भन्‍नु ! लाग्छ, म वशीकरणमा परेकी थिएँ । त्यसले मलाई कालो जादू गर्‍यो ।
तपाईंको कुरा बाझियो । कहिले अपहरण भन्‍नुहुन्छ, कहिले वशीकरण । वशीकरण हो भने उसले करणी आशयको उद्देश्यले तपाईंलाई ...
होइन, होइन । करणीको त सवालै छैन । उसलाई देखेपछि म ऊप्रति अनायास मन्त्रमुग्ध भएकी हुनुपर्छ । बुलडोजरको इन्जिन बन्द गरेर उसैको पछि लागेँ । उसले मलाई एउटा पुरानो महलभित्र लिएर गयो । बाहिरबाट जीर्ण देखिए पनि उक्त महल भित्रबाट भने ज्यादै आधुनिक देखिन्थ्यो । उसले सेमिनार हलजस्तो विशाल कक्षमा छिराएर अंगुरका झुप्पाहरु दियो । अंगुर मेरो मनप्रिय फल हो भन्‍ने कुरा उसले कसरी चाल पायो ? ताज्जुब लाग्यो ।
तपाईंले ऊसित कुराकानी गर्नुभएन ? उसको नाम के थियो, सोध्नुभएन ?
उसले आफ्नो नाम प्यारासाइट बतायो । प्यारासाइट ! त्यो पक्कै पनि उसको निकनेम, गुप्तनेम या कोडनेम हुनुपर्छ । नत्र प्यारासाइटजस्तो अजीव–ओ–गरिब नाम कसले राख्छ ? प्यारासाइट शर्मा ओली, प्यारासाइट महरा, प्यारासाइट देउवा, प्यारासाइट दाहाल तथा प्यारासाइट वीरविक्रम शाहजस्तो नामथर को राख्दो हो ?
ओके बुलडोजर गर्ल ओके ! त्यो किडन्यापरले तपाईंलाई अपहरण गर्नुको कारण, रहस्य या प्रयोजनचाहिँ के रहेछ ?
ठ्याक्कै के प्रयोजन थियो, यकिन भएन । तर उसले मलाई एउटा फिल्म देखायो । फिल्म मलाई बबाल लाग्यो । त्यस्तो भव्य एवं आकर्षक फिल्म मैले बिरलै हेरेकी छु । त्यस्तो दामी फिल्म हेर्न पाइने हो भने त म पटक–पटक अपहरणमा पर्न चाहन्छु । वाह, कस्तो माइन्ड ब्लोइङ फिल्म थियो त्यो ! म मन्तुष्ट भइगएँ ।
मन्तुष्ट ? यु मिन सन्तुष्ट ?
जब मन सन्तुष्ट हुन्छ, तब हामी मन्तुष्ट हुने गर्छौं । कमन सेन्स, म्यान !
ओके ओके, गज्जब ! अब भन्‍नुस्, अपहरणकारीले कुन फिल्म देखाएको थियो ?
फिल्म पनि उसले प्यारासाइट नै देखायो । अ साउथ कोरियन थ्रिलर ड्रामा, यु सी ! खैर, फिल्मको अन्त्यपछि अपहरणकारीले मेरो लोग्‍नेको फोन नम्बर माग्यो । मैले टिपाइदिएँ । त्यसपछि लोग्‍नेलाई फोन गरेर उसले भन्यो, ‘तपाईंकी वान एन्ड द ओन्ली । लोन्ली वाइफ अपहरणमा पर्नुभएको छ । तपाईंलाई हेक्का होस् ।’
क्‍वाइट इन्ट्रेस्टिङ ! कस्तो विचित्रको किडन्यापर रहेछ । यसले तपाईंको लोग्‍नेसित फिरौती माग्यो होला, होइन ? कति रकम माग्यो ?
फिरौती रकम होइन, उसले फिरौती डिभिडी माग्यो । उसले मेरो लोग्‍नेसित अर्को बिहान घाम उदाउनुअघि प्यारासाइट फिल्मका सय थान डिभिडी चक्काहरु कुनै पनि हालतमा ल्याइपुर्‍याउने आदेश दियो । नल्याएको खण्डमा निजले मलाई सय झुप्पा अंगुर जबर्जस्ती खुवाएर मर्डर गरिदिने धम्की पनि लोग्‍नेलाई दियो । उसको कुरा सुनेर म भयभीतभन्दा बढी आश्चर्यचकित भएँँ ।
म पनि आश्चर्यचकित परेको छु । तपाईंको लोग्‍नेले अर्को बिहान प्यारासाइट फिल्मका सय थान डिभिडी ल्याए ?
बिहानसम्म कुर्नै परेन । मध्यराततिर लोग्‍ने शिवपुरी जंगल आइपुग्‍नुभयो, सय थान डिभिडी लिएर । बिचरा लोग्‍ने । त्यत्तिका डिभिडीहरु उहाँले कसरी जुगाड गर्नुभयो होला ? डिभिडी पाएर अपहरणकारी प्रसन्‍न भयो । मलाई तत्काल छाडिदियो । यसरी एउटा विसंगतिपूर्ण अपहरणको उदेकलाग्दो एपिसोड समाप्तियो ।
एउटै फिल्म त्यत्तिका डिभिडीहरु अपहरणकारीलाई किन पो चाहिएको रहेछ ?
यस्तै खालको प्रश्नले म पनि केही दिन सोचमग्‍न भएँ । मनमा जिज्ञासाको बादल छाइरह्यो । त्यो बादल हिजो फाट्यो । साँझपख, म बुलडोजरमा घर फर्किरहेकी थिएँ । त्यो किडन्यापरलाई मैले दरबारमार्गको जेब्रा क्रसिङमा देखेँ । बाटो काटिरहेका मानिसलाई ऊ प्यारासाइट फिल्मको डिभिडी बाँडिरहेको थियो । अचम्म ! प्यारासाइट अपहरणकारीले प्यारासाइट मानिसलाई प्यारासाइट फिल्म हस्ते गरिरहेको थियो । लाग्थ्यो, सहरमा ऊ प्यारासाइटका कीटाणुहरु फैलाइरहेको थियो ।
पोयट्री एक साउथ कोरियन फिल्म हो । यस्तो फिल्म, जहाँ दृश्य आरम्भ हुनुअघि खोलाको कलकल जलध्वनि तपाईंहरुको कानमा गुन्जिन थाल्छ ।